Iingcebiso zeNgcali zokudibana noMntu oMtsha - Ukuthandana Iingcali
Umxholo E Iiphulo Zokonwabisa
Iingcebiso zeNgcali zokudibana noMntu oMtsha
Udliwanondlebe lwengcali nombhali uNicholas Aretakis uya kukunika iingcebiso ngokuhlangana nomntu omtsha. Elinye lawona mava oyikisayo wokuba ungatshatanga kukusondela kumntu onomdla wokwazi ngcono. Iingcebiso malunga nokudibana nomntu omtsha zikunika iingcebiso malunga nokuba ungathini, cinga kwaye wenze, kwaye ungazi njani ukuba umntu othetha naye kufanelekile ukuba umbuze ngomhla wokuqala.
Liliphi icala elihamba inquma emva kokugqiba kwakho
Malunga noNicholas Aretakis
Bendi jet-setting, serial-dating bachelor iminyaka engaphezu kwama-20 kubomi bam bokuthandana, ndakuba ngusozigidi waseSilicon Valley ndineminyaka engama-30. Ngeloxesha ndandichitha ixesha namakhulu abafana, ubukhulu becala 'uhlobo-A' , kwaye baqala ukuqaphela okungapheliyo malunga nendlela ababaphatha ngayo, kwaye bahlala bephathwa kakubi, abasetyhini. Ndakhuthazeka ukuba ndibhale Ukulungiselela uMnu okungalunganga: Indlela yokuphelisa ubudlelwane obubi kunye nokufumana uMnu (Next Stage Press) xa ndaye ndazimisela kumkam (ndatshata ndineminyaka engama-42). Kumava am okuthandana, ndiqaphele indlela abafazi abangatshatanga ababetsala nzima ngayo ukuhlangabezana nabafana abahloniphekileyo, ngakumbi xa bengena kwi-30s yabo kwaye benethemba lokudibana kwaye batshate iqabane elizayo ukuze baqale usapho, kodwa babonakala bechitha ixesha elixabisekileyo kunye nabangalunganga.
Izinto ezili-10 ekufuneka zenziwe ngoMhla wokuqala
Igalari ye-7 yoMhla wokuzonwabisa woNgcono woBusuku
Iifoto ezili-10 eziMnyama zabafazi abanga
Ndichithe unyaka ndenza udliwanondlebe neengcali zobudlelwane kunye nee-singles zencwadi. Uphando lwam lubonisa ukuba kuthabatha iminyaka emihlanu kuye esixhenxe ngokomyinge ukuba owasetyhini ahlangane kwaye atshate umntu olungileyo. Abasetyhini kwi-30 yabo abanalo ixesha elininzi lokuchitha. Umyalezo omkhulu kwi Ukurhola uMnu okungalunganga yile: Ukufumana uMnu. Kulungile akufuneki kube nzima, kube nzima, okanye kudle ixesha. Esi sikhokelo sokubonelela ngokubonelela sibonelela ngeendlela ezingqalileyo, izixhobo, kunye neengcebiso ngabafazi abangatshatanga abanokufaka isicelo sokuchonga uMnu.
Iingcebiso ngokuhlangana nomntu omtsha
I-LTK: Umntu angaqala njani incoko nomntu omtsha?
UNicholas Aretakis (NA):
Yenza ukubonwa okuhlekisayo okanye okuhlakaniphile malunga nemeko okanye indawo engqongileyo.
Buza uluvo malunga nento - umzekelo, eso siqwenga sobugcisa esibambe ingqalelo yakho, okanye umculo odlalayo.
Ukuba usepatini, babuze ukuba ngubani owaziyo, kwaye uzame ukuba bathethe ngabo.
Ukuba umntu unxibe into esefashonini, mncome kwisinxibo okanye kwizihlangu.
Zama ukufumana into oyithandayo efanayo.
Ukuba incoko iyaqhubeka, lunga ngezizathu ezithathu ezizodwa zokuba kutheni umntu efuna ukukwazi ngcono. Umzekelo, 'Ndingumpheki odumileyo waseThai. Ndiyazi ezona ndawo zintle, ezingafumanekiyo kwesi sixeko. Ndifuna ubone amahashe am ayintshatsheli. '
I-LTK: Umntu angaluthatha njani uxinzelelo lokuhlangana nomntu omtsha?
Ngokwale meko, nobabini nikumgangatho ofanayo. Niyadibana nobabini okokuqala, ke niyalingana kwaye ninamandla alinganayo.
Ukuba unyanisekile kwaye ukhululekile, omnye umntu uya kukhululeka naye.
Jonga amehlo omntu. Ukuba ubona amehlo akhe ebhadula ngelixa uzama ukuthetha, lulwimi oluthetha ngomzimba ukuba akufuneki uchithe ixesha lakho. Qhubeka uthethe nomnye umntu.
Abantu bayaphendula xa uthobekile okanye uzithobile. Zama ukuhlekisa loo mntu, nokuba uyazihlekisa: 'Ndiyaqhuma. Umhlobo wam wandimema kwaye wandigxotha kumnyango wangaphambili. '
I-LTK: Zeziphi ezinye zezinto umntu anokujonga ngazo ukuba loo mntu unokuba nomdla wokuya kumhla wokuqala?
Umntu ukubuza imibuzo malunga 'nawe.'
Wenza unxibelelwano oluninzi ngamehlo, nokuba kukho iziphazamiso ezinje ngeefowuni, imiyalezo ebhaliweyo okanye abanye abantu abaphazamisayo.
Ukuphatha ngobumnene nangokufanelekileyo kuthumela umqondiso onamandla wokuba umntu othile atsalwe kuwe.
Ufumana ukunconywa ngesinxibo sakho.
Umntu unomdla wokufunda ngakumbi ngento oyithandayo.
I-LTK: Zeziphi ezinye iindlela ezilungileyo zokubuza umntu ngomhla?
Umtshato womtshato ekunene intsingiselo
Ndiyayithanda indlela ethe ngqo, kodwa hayi ukuba ndlongondlongo enje ngala, 'Ndibe nexesha elimnandi lokuthetha nawe, ungathanda ukubamba isidlo sangokuhlwa okanye isiselo ngelinye ixesha? Ungakhathazeka xa undinika inombolo yakho? ' Umzekelo wokuba ndlongondlongo kukuba, 'Ngaba uyafuna ukufumana isidlo sakusasa nam ngomso?'
Okanye ukuba uyazi ngento emnandi eyenzekayo, buza loo mntu ukuba ufuna ukudibana nabahlobo bakho ngosuku nangexesha elithile (ulawulo oluncinci, kodwa unganyanzelisi ukuba awuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba kukho ukuthanda ngolunye uhlobo).
Ukwenza umbono oLungileyo wokuqala
Ukurhola uMnu okungalunganga
loluphi uhlobo lwewayini ekufuneka ndiyisele
I-LTK: Zeziphi ezinye zezinto abantu abangatshatanga ekufuneka bazigcine engqondweni xa bedibana nomntu omtsha?
Kuya kufuneka baqinisekise ukuba banolindelo olufanelekileyo- ngaba banomdla onyanisekileyo komnye umntu ngothando okanye ngokwasentlalweni? Ngaba abaqinisekanga? Ngale ndlela, ngekhe bathethe gwenxa ngezi zinto banomdla kuzo, kwaye abazukuzibekela ukudana.
I-chemistry yokuthandana ihlala ihlangana. Ukuba unomdla wokwenene kwaye wonwabile, umhla wakho unokufumana ixesha elihle nalo.
Akukho sizathu sokuba ungxame. Ukuba lo mntu uyakuthanda, kunethuba elininzi lokuxelela ngakumbi malunga nawe kamva. Ukuba uyaphumla kwaye uzama ukuba ngalo mzuzu-ungakhathazeki ngekamva-uyakuba nexesha elingcono kwaye ube nakho ukubona ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye, ngokuchasene nale nto ufuna yenzeke.
I-LTK: Zeziphi ezinye zezona mpazamo zixhaphakileyo xa singazi umntu omtsha?
N / A: Benza isigqibo ngokukhawuleza okukhulu, okanye bazibandakanye nomntu ngokweemvakalelo nangokwasemzimbeni, ngaphambi kokuba bazi ngokwaneleyo ngalo mntu. Emva koko bayazisola okanye baneentloni, okanye banamathele ekuphumeni kubudlelwane obubi. Ndicebisa ukuba abantu baphathe ukuthandana njengodliwanondlebe lomsebenzi. Zeziphi izinto ezincinci umqeshi anokukunika umsebenzi xa ubuya kuqesha isikhundla esibalulekileyo? Uya kujonga i-CV yomgqatswa, uqiniseke ukuba iyahambelana namava, imfundo, okanye uqeqesho lwesikhundla. Uya kubuza imibuzo efanelekileyo ukuze ubone ukuba umntu unako ukwenza umsebenzi kakuhle. Ukongeza, uya kujonga izingqinisiso, kwaye hayi ezo zinikezelwayo, kodwa nabantu abasebenze naloo mntu. Kuya kufuneka uqhube olu hlobo lophando kubantu uthandana nabo. Lo ingangumntu ogqiba ukulala naye, uthandana naye rhoqo, onokufikelela kulwazi lwakho olusenyongweni okanye lwezezimali, okanye unokugqibela ngokutshata okanye ukuba nomntwana naye. Yenza umsebenzi wangasemva!
I-LTK: Umntu angayenza njani into entle ngaphandle kokubonisa ubuxoki?
N / A: Awudingi ukuvolontiya kuzo zonke izinto ezimbi okanye iingxaki, kodwa kukho izinto ezithile ezingafanelekanga ukuthintelwa. Ukunyaniseka yindlela elungileyo yokuqalisa ubudlelwane, kwaye akufuneki ushiye izinto ezithile. Umzekelo, omnye umntu kufuneka azi ukuba utshatile kwaye uza kuqhawula umtshato; Unabantwana; uhlala nabazali bakho; uyatshaya; awunamsebenzi; okanye uneenkolelo zonqulo ezomeleleyo ezibumba indlela ophila ngayo kunye nezigqibo eziphambili ebomini. Ukuba unemicimbi yabucala ethe kratya, njengokubona ugqirha wezifo zengqondo, onokuthi ushiyelwe ixesha elizayo, njengoko usiya 'kumhlaba ozinzileyo' kunye nomntu omtsha. Umgaqo wesithupha ngulo: Ukuba umba wakho uyinto ofuna ukuyazi ngaphambi kokuba usondele komnye umntu, kuya kufuneka ke wabelane ngayo ngexesha elifanelekileyo, ngaphambi kokuba omnye umntu enze unxibelelwano lweemvakalelo nawe, olunokuthi luhambelane ixesha oqala ngalo ulwalamano olusenyongweni.
I-LoveToKnow Dating ingathanda ukubulela uNicholas Aretakis ngeengcebiso zakhe zokuhlangana nomntu omtsha.
Abantu Abadumileyo Yinyani Ukubhala Ukuhonjiswa Kwekrisimesi Zilolonge Slideshows Ukwaphula Up Tips
amazwi athuthuzelayo ngokufa komntwana
indlela yokwenza imisonto yamakhandlela eyenziwe yasekhaya
injani ikati yecalico
Ungalufumana njani ulwazi emntwini
vumela amaxesha amnandi aqengqele ukuguqulelwa kwesiFrentshi